Global Voices teny Malagasy » Ametraham-panontaniana indray ny zo hitantara : Kiobàna mpanao gazety, iharan’ny tsindry ataon’ny mpitondra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Oktobra 2019 17:18 GMT 1	 · Mpanoratra Periodismo de Barrio Nandika (fr) i Annick Battesti, avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Karaiba, Kiobà, Fanampenam-bava, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Ity lahatsoratra ity dia vokatry ny fiarahana miasa amin'ny gazety an-tambajotra kiobàna Periodismo de Barrio  [gazetim-bohitra]. Noho io fifanomezan-tànana io, ho azon'ireo mpamakay anay atao ny mahafantatra firenena hafa noho izay efa fanolotr'ireo gazety mahazatra.
Lobaka misoratra makarakara sy jean miloko antitra no teny amin'i Major Damián Arcos. Mpanampy efa antitra sy miolankolana izay i Major Nelson. Miakatra ny tohatra ry zareo. Rehefa nantsoin'izy ireo i Jesús Jank, manomboka eo ny ady ara-tsaina sy ny fakàna am-bavany kidaladala, satria avilan-dry zareo tanteraka ny valinteny mandra-piafara amin'ny hoe resy lahatra ry zareo fa nahazo izay valinteny notadiaviny. Na raha tsy izay, averimberiny eo foana ireo fanontaniana, ka raha toa miaka-pofona kely, na mampiaka-peo na mazan-doha manoloana azy ireo, lasa izao : miditra ! Alain-dry zareo am-bavany izy momba ny famatsiambola raisin'ny Periodismo de Barrio sy ny tanjony, ary anontanian-dry zareo raha toa izy ka tonga saina tsara hoe ny fanaovana ny asa izay ataon-dry zareo io “dia fanomezana fitaovampiadiana ho an'ny fahavalo”. Nahoana no i Goatemalà ? Dia valian'i Jesús Jank fa batey [fr]  iray manana tantara tsara sy mendrika ny ho tantaraina io. Izay tsy takatr'izy ireo tsara ny tiany hambara, dia ny hoe ny famoriambola atao eny ifotony, tsy araka izay lazain'izy ireo, dia tsy orinasa amerikàna, ary ny mpanao gazety iray dia tsy hoe fotsiny karatra iray sy fanomezandàlana iray omen'ny Antoko Kaominista na koa laharam-boninahitra monja ihany. Ilay mpakasary koa, ezahan-dry zareo ny hampisavoritaka ny sainy amin'ny fanotofana fanontaniana, saingy tsy rototra ramatoa io mamaly – izy, ilay mpianatra – na dia lazain-dry zareo azy aza fa io “gazety kely”, Periodismo de Barrio, io dia mampiasa azy, na rehefa rahonan-dry zalahy ho roahana ao amin'ny ajerimanontolo izy.
Navoaka miaraka amin'ny fanomezandàlan'ny Periodismo de Barrio . Raha hamaky ny lahatsoratra niaingàna dia ato . [esp]
Ity tantara ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Netizen Report  an'ny Advox , tetikasa an'ny Global Voices natao hiarovana ny fahalalahan'ny fanehoana hevitra sy hiadiana amin'ny sivana anaty tambajotra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/27/143859/
 batey [fr]: https://fr.wikipedia.org/wiki/Batey
 Netizen Report: https://es.globalvoices.org/2019/08/12/netizen-report-periodistas-en-la-mira-desde-cuba-hasta-camboya-y-mas-alla/